technology Inverquark iqulunqwa yi Aquark Electric Ltd. Emva kweminyaka zophuhliso kunye nophando, ngo-2017, ubuchwepheshe Inverquark ekhethekileyo yaziswa ngempumelelo sidibanise mveliso. Yeyona ugcino inverter pool ukufudumeza isisombululo kakhulu cwaka & amandla. amandla yayo zezi stepless DC Inverter, inkqubo yolawulo pool inverter ezizodwa kunye nokhuseleko ezikrelekrele.
core technology Inverquark kaThixo stepless DC inverter. It uwenza inverter isiguquli stepless and DC brushless fan motor. Isantya anokuthi alungi-lungiswe elilodwa omnye elilodwa enye ngeenxa zonke ngazinye ngeenxa zonke, ebonelela amazing yokusebenza ugcino lwamandla cwaka kakhulu.
Eyahlukileyo Inverter Control System
inkqubo yolawulo Inverquark kaThixo ngokukodwa yenzelwe ukufudumeza pool. Oku uyakwazi ukunyenyisa amandla ubushushu kanye ngendlela ezahlukeneyo ilahleko zokufudumeza lonyaka pool. Le Ifilosofi yoyilo ukuphumeza ukufudumeza Wanamathela ngesantya esiphakamileyo ekuqaleni kwexesha lonyaka, kunye okonga engcono namandla eliseleyo kule sizini isantya eliphantsi.
Inverquark enokumelana ombane banzi kwaye ukutshintsha inkqubo kwimeko ezahlukeneyo ezinzima. Umzekelo, ukuba kukho lombane okanye umoya kakuhle, inkqubo ingadala isantya ngokukhalipha ukusebenza kakuhle. Ngoko ke, oko kuzisa ixesha ayahlala zemveli pump ubushushu on / off.